Jarmalka oo sheegay in Soomaalidu yihiin kuwo leh Arimo.. |
Jarmalka oo sheegay in Soomaalidu yihiin kuwo leh Arimo..
Dowladda Germany ayaa sheegtay in ay qaabiliyso qoxootiga Dalal Afar ah oo ka mid ah kuwa ay dadkoodu ka cararayaan Colaado iyo dhibaatooyin kale oo heysta.
Soomaaliya, Eritrea, Suuriya iyo Ciraaq ayey sheegtay Dowladda Germany in ay dadkooda Qoxooti u qaabileyso, Xeryo ayey sheegtay in ay uga sameysay Magaalooyinka Waaweyn ee dalkaas, waxayna sheegtay in dalalkaas aan soo sheegnay ay qaarkood ka jiraan Colaado halka kuwo kalena ay ka Jiro Gumeysi Gudaha ah.
Angela Merkel Hogaamiyaha Dalka Jarmalka ayaa waxaa ay sheegtay in dalalka Soomaaliya, Suuriya iyo Ciraaq oo ay Colaad ka jirto, sidoo kale waxaa ay sheegtay in Eritrea uu iyadana ka jiro Gumeysi Guha ah sida ay sheegtay isla markaana aan dadka la geyn doonin.
Dadka dalalkaas ayaa dhammaantood waxaa ay Dowladda Germany sheegtay in ay qaabili doonto, xeryaha qoxootiga ee loo sameeyayna ay ku jiri doonaan.
Dowladda Germany ayaa muddo dheer keddib dabcisay Sharcigeeda dadka soo Galootiga ah, waxayna hadda billaabeysaa in ay qaabisho dad dalalkooda uga soo cararay Colaado iyo dhibaatooyin shaqo la’aantu ka mid tahay.